Odayaasha Dhaqanka oo dadaalo ka dhex wada Ahlu Sunna iyo Qoor... | Universal Somali TV
Odayaasha Dhaqanka oo dadaalo ka dhex wada Ahlu Sunna iyo Qoorqoor
Wararka inaga soo gaaraya Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug ayaa sheegay inay Odayaasha Dhaqanka bilaabeen dadaalo, ay ka dhex wadaan masuuliyiinta labadii maamul ee dhawaan lagu dhisay magaaladaasi.
Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor), Madaxweynaha Galmudug ee garabka dowladda oo Isniintii la kulmay Odayaasha Dhaqanka ayaa ka codsaday inay garwadeen ka noqdaan dadaalada, uu ku doonayo in lagu xaliyo khilaafka kala dhaxeeya Ahlu Sunna.
Odayaasha Dhaqanka oo soo dhaweeyay baaqa Madaxweynaha waxaa ay bilaabeen dadaalada la isugu soo dhaweynayo labada dhinac.
Wararka ayaa sheegaya in Odayaasha Dhaqanka ay xiriir la sameeyeen Hoggaanka Ahlu Sunna, iyagoona ka codsaday inay aqbalaan ergaynta ay ka yihiin Madaxweyne Qoorqoor.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya inaanay weli Odayaasha Dhaqanka wax ballanqaad ah ka helin Hoggaanka Ahlu Sunna, balse ay rajadoodu tahay inay soo dhawayn kala kulmi doonaan.
Ahlu Sunna oo bishii January ka hortimid dhabihii ay dowladda u martay dhismaha Galmudug-ta cusub ayaa waxay dooratay Madaxweyne, kaasoo loo doortay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Waxay kaloo Ahlu Sunna ka hortimid doorashadii 2-dii bishan ka dhacday Magaalada Dhuusamareeb, laguna soo doortay Qoorqoor, oo loo arkaayay musharaxii ay dowladdu taageereysay.
Kan-xigaDagaal ka soconaya Magaalada Kismaayo
Kan-horeShirka Garsoorka Dalka oo ka furmay M...
54,599,569 unique visits